Sida loo yareeyo Kharashka Macaamilka ee aad ku iibsanayso ROI ugu badan | Martech Zone
Sida loo dhimo Qiimaha Macaamilkaaga ee ROI ugu badan
Talaado, Oktoobar 26, 2021 Talaado, Oktoobar 26, 2021 Ruubeen Yonatan
Marka aad hadda bilaabayso ganacsi, waxa ay kugu jiidanaysaa macaamiisha si kasta oo aad awooddo, iyada oo aan loo eegin kharashka, wakhtiga, ama tamarta ku lug leh. Si kastaba ha noqotee, markaad wax barato oo aad korto waxaad ogaan doontaa in isku dheelitirka guud ee kharashka macaamiisha iyo ROI ay muhiim tahay. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa inaad ogaato qiimaha iibka macmiilkaaga (CAC).
Sida loo Xisaabiyo Qiimaha Macaamilka
Si loo xisaabiyo CAC, kaliya waxaad u baahan tahay inaad kala qaybiso dhammaan iibka iyo kharashyada suuqgeynta ee ku lug leh helitaanka macmiil cusub muddo cayiman gudaheed. Haddii ay dhacdo inaadan aqoon, waan ka gudbi doonaa CAC formula halkan:
Haddii aan si fudud u dhigno, haddii Karl uu $10 ku kharash gareeyo suuq-geynta sharaabkiisa liinta oo uu toban qof ku iibsado badeecadiisa hal toddobaad gudaheed, qiimaha uu ku iibsanayo toddobaadkaas wuxuu noqonayaa $1.00.
Waa maxay Qiimaha Macaamilkaagu?
Taasi waa tusaale fudud oo qurux badan xagga sare. Dabcan gudaha shirkad heer ganacsi ah, CAC aad ayay uga sii adag tahay:
Wadarta Suuqgeynta - tani waa inay ku jirtaa shaqaalaha suuqgeynta, wakaaladahaaga, hantidaada, shatiga software-kaaga, iyo xayaysiis kasta ama kafaalaqaad kasta oo aad ku darto si aad u hesho cusub macmiil.
Wadarta Kharashaadka Iibka - tani waa inay ku jirtaa shaqaalahaaga iibka, guddiyadooda, iyo kharashkooda.
Kakanaanta kale ayaa ah in si sax ah loo cabbiro wakhtigaaga macaamiisha la helay. Kharashyada suuq-geynta iyo iibinta maanta isla markiiba ma keenaan macaamiil la helay. Waxaad u baahan doontaa inaad qiyaasto celceliska safarkaaga wax iibsiga… halkaas oo macaamiil suurtagal ahi uu ka warqabo alaabtaada ilaa halka ay dhab ahaantii u beddelaan. Marar badan, tani waxay noqon kartaa bilo ama xitaa sanado iyadoo ku xiran warshadaha, wareegyada miisaaniyada, iyo gorgortanka.
Tani waa sababta ay muhiim u tahay inaad ku darto istaraatijiyad soo gal ah oo si fiican u tilmaamaysa sida rajada lagaa maqlay, markii ugu horeysay ee ay kugula xidhmaan, ilaa taariikhda beddelka dhabta ah.
Sida loo dhimo Qiimaha Macmiilkaaga
Marka aad ogaato sida loo xisaabiyo CAC-gaaga, waxa aad doonaysaa in aad hoos u dhigto si aad u aragto faa'iido caafimaad leh oo macmiil kasta ah. Wax kale oo aad rabto inaad sameyso ayaa ah haynta macaamiisheeda jira - iibsashada macaamiishu waxay ku kici kartaa ilaa todoba jeer in ka badan iibinta macaamiisha jira, ka dib oo dhan!
Si aad u hesho tilmaamo badan oo ku saabsan tayaynta qiimaha iibka macmiilkaaga, GetVoIPXogta hoose waxay muujinaysaa shan xeeladood oo cusub. Tusaale ahaan, abuurista ka-qaybgal iyo nuxur macno leh waxay kaa caawin kartaa inaad la samaysato dammaanad macaamiisha taasoo gaadhsiisa inay si degdeg ah u gaadhaan goobtooda. Ku dar qaar CTA-yada dilaaga ah waxaana laga yaabaa inaad hesho macaamiil wax ku iibsanaya qaybta koobaad ee macluumaadka ay cunaan!
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa automation marketing si aad faa'iido kuu yeelato. Tusaale ahaan, macaamiisha Birchbox waxay helayaan iimayl soo dhawayn ah oo ay ku xigto taxane iimaylo ah oo ku saabsan tabaha quruxda iyo khiyaamada qurxinta. Qaar badan oo ka mid ah dadkan xitaa ma aysan iibsan weli, laakiin shirkadu waxay horay u soo bandhigtay qiimo badan oo bilaash ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa chatbots, iimaylo shaqsiyeed oo toos ah iyo ololeyaal warbaahinta bulshada si kor loogu qaado waxtarka.
Waxaad ka heli kartaa kuwan iyo talooyin dheeraad ah hoosta. Markaad ogaato oo aad horumariso CAC-gaaga, waxaad awoodi doontaa inaad aragto soo-noqosho badan oo maalgashi, taasina had iyo jeer waa wax aad u fiican in la arko!
Tags: kharashka helitaankamarketing affiliatebarnaamijka affiliatebirchboxcaccac formulaxisaabi cacContent Suuqheerka sare u-rogiddakharashka iibsigafadhihelitaanka macaamiishaqaacidada kharashka iibka macaamiishahaynta macaamiishaformulahelosida loo xisaabiyo cachagaajinta heerka beddelkawanaaji crosuuq-geynta suuqakharashyada suuqgeyntatirada macaamiisha la helaydib-u-celintakharashaadka iibka
Reuben Yonatan waa aasaasaha iyo madaxa fulinta GetVoIP, Ilaha isbarbardhigga VoIP kaas oo ka caawiya shirkadaha inay fahmaan oo ay doortaan xalka isgaarsiinta ganacsiga ee baahiyahooda gaarka ah. Reuben waxa uu ka caawiyaa SMB-yada in ay is waafajiyaan istiraatijiyadda ganacsiga iyo dhaqanka iyo horumarinta kaabayaasha guud ee shirkadda. Isaga kala soco Twitter-ka @ReubenYonatan